गर्मि मौषममा कहाँ घुम्ने , यी स्थान पर्न सक्छन तपाइको नजरमा ! - ParyatanBazar.com
गर्मि मौषममा कहाँ घुम्ने , यी स्थान पर्न सक्छन तपाइको नजरमा !
चैत २२, काठमाडौं । गर्मि मौषमले चारैतिर हपहपी सुरु भइसकेको छ । गर्मि छल्न कहाँ जाने अझ भनौ गर्मि बिदा र अन्य बिदालाई कसरी शान्त मनोरम र चिसो बन्ने भनेर सोचमा हुनुहुन्छ भने यी स्थान तपाइको आकर्षण को क्षेत्र बन्न सक्छ ।